काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकी मिड साइज एसयूभी श्रेणीमा केही नयाँ गर्ने योजना बनाइरहेको छ। कम्पनीले बजारमा आफ्नो पकड जमाउनका लागि नयाँ योजना बनाइरहेको हो। बजारमा अहिले मिड साइज श्रेयणीका एसयूभी सेक्सनमा ह्युन्डईको क्रेटा र कियाको सेल्टोसको दबदबा छ। मारुतीको एस–क्रस भी मिड साइज एसयूभी श्रेणीमा...
काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारी ब्रान्ड दीगोले ‘दीगो ई८’ विद्युतीय ह्याचब्याक कारको मूल्य घटाएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्ने महसुल र अन्तःशुल्क घटेसँगै कम्पनीले आफूसँग स्टकमा रहेका कारको मूल्य परिमार्जन गरेको छ। सरकारले गरेको यस सकारात्मक कदमको सरहानास्वरूप स्टकमा रहेको गाडीको समेत मूल्य परिमार्जन गरिएको दीगो ई८ कार...
काठमाण्डौ । विश्वमा निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो छ। ठूला कार निर्मातना कम्पनीले अब पेट्रोलको सट्टा विद्युतीय कार निर्माणमा जोड दिन थालेका छन्। यसरी विद्युतीय कार निर्माणमा जोड दिनुको कारण भने वातवरणीय प्रभाव तथा किफायती र सस्तो पनि हुन जाने हो। अहिलेको अवस्थामा सन् १९१३ मा हेनरी फोर्डले उत्पादन गरेको पहिलो कार पछिको सबैभन्दा ठूलो...
काठमाण्डौ । ह्युन्डाई क्रेटा सबैभन्दा लोकप्रिय मिड साइज एसयूभी हो। यदि तपाइँ ह्युन्डाई क्रेटा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खिनुहोस् । किनकि कम्पनीले भारतमा नयाँ क्रेटा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो कारको मिड लाइफ अपडेट हुनेछ। नयाँ ह्युन्डाई क्रेटाको फेसलिफ्ट कोरियामा परीक्षणका क्रममा देखा परेको थियो। क्रेटाको...
आउँदैछ नयाँ रोयल इनफिल्ड क्लासिक ३५० बाइक, कहिलेसम्म होला लन्च ?
काठमाण्डौ । रोयल इनफिल्ड क्लासिक ३५० कम्पनीको बेस्टसेलिङ बाइक हो। यो बाइकको रेट्रो लुक निकै मन पराइएको छ। कम्पनीले गत वर्ष यो बाइक सन् २०२० मा बीएस सिक्स इन्जिनका साथ पेस गरेको थियो। अब कम्पनीले यो बाइकको नेक्सट जेनेरेसन मोडल लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ बाइकमा रोयल इनफिल्ड क्लासिक ३५० मा कम्पनीले मिटियर ३५० मा उपलब्ध गराइएको...
काठमाण्डौ । ललितपुर महानगरपालिकाले ६ वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा आगामी ४ महिनामा ६ वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। यस योजना खाका बनाइसकेको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए। ‘अब एक हप्ताभित्रमा टेन्डर पनि आह्वान गर्दैछौँ’, उनले भने। बस किन्न...
काठमाण्डौ । सारा विश्व यतिबेला पेट्रोल र डिजेलभन्दा सस्तो विकल्पका रुपमा इलेक्ट्रिक गाडी हुने भनिरहेका छन्। यद्यपि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एउटा स्टार्टअप कम्पनी हम्बल मोटर्सले एउटा उत्तम विकल्प पेस गरेको छ। कम्पनीले सौर्य ऊर्जाबाट इलेक्ट्रिक कारको कन्सेप्ट सार्वजनिक गरेको छ। डिजाइन र बडी टाइपको हिसाबले विश्वकै पहिलो सौर्य...
काठमाण्डौ । साउद कोरियाको दिग्गज कार निर्माता कम्पनी किया मोटर्सले आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक कार ईभी–सिक्स कार लन्च गरेको छ। यो कार एउटा डेडिकेटेड प्लेटमर्फमा आधारित रहेको छ। कियाले यो कार पहिलो अल–इलेक्ट्रिक मोडल पनि हो। जुन १८ मिनेटमा ८० प्रतिशत चार्ज हुन्छ भने फुल चार्जमा ५१० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ। ईभी–सिक्सका अन्य...
काठमाण्डौ । लग्जरी कार निर्माता दिग्गज जर्मन कम्पनी बीएमडब्ल्यूले पहिलोपटक फुल इलेक्ट्रिक कार सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले आई फोर नामक इलेक्ट्रिक कार सार्वजनिक गरेको हो। यो कार छिटै बजारमा ल्याइने कम्पनीले जनाएको छ। बीएमडब्ल्यूले सन् २०२५ सम्म २५ वटा इलेक्ट्रिफाइड कारहरु ल्याउने योजना बनाएको छ। जसमा कम्पनीले फोर डोरवाला नयाँ...
काठमाण्डौ । विश्वको नं. १ र नेपालको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको प्रिमियम मोटरसाइकल ब्रान्ड केटीएमले बहुप्रतिक्षित केटीएम २५० एड्भेन्चर लन्च गरेको छ। नेपालमा व्यापक रुपमा बढिरहेको एड्भेन्चर मोटरसाइकलको सेग्मेन्टलाई विस्तार गर्नका लागि यो मोटरसाइकल लन्च गरिएको हो। यसअघिको केटीएम ३९० एड्भेन्चरले उत्साहीहरुको कल्पनात्मकता र...